voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny taranja basikety baolina sokajy N1 A. Samy nahazo Amboara lehibe sy taratasim-bola mitentina 2.000.000 ariary avy izy ireo tamin’izany raha taratasim-bola 1.000.000 ariary avy kosa ny an’iretsy faharoa. Ny ekipa fahatelo avy kosa dia ny Ascut lehilahy sy Ankaratra vehivavy dia samy mbola notoloran’ny Telma 200.000 ariary avy. Ary ireo ekipa nitana ny laharana faha-4 lahy sy vavy aza mbola nahazo 100.000 ariary avy. Toy izany koa ireo mpilalao mendrika lahy sy vavy (Mory sy Sarobidy) ary ireo mpampidi-baolina be indrindra (Monja Romain sy Emerachine). Ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto no nitarika ny fanolorana an’ireo amboara rehetra ireo sy namarana ofisialy an’ity fifaninanana ity omaly tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina). Niavaka kosa ny fanoloran’ny Telma taratasim-bola nitentina 2.500.000 ariary an’izy 4 mirahalahy tompondakan’i Afrika 2019 teo amin’ny Basket 3 X 3.